Ihe niile gbasara Microsoft Surfaces, nke ị ga-ahọrọ? Dị ka ha dị? Nduzi
Microsoft chọrọ ịgbaso nzọụkwụ Apple wee malite otu ngwaike nke ha nwere sistemụ arụmọrụ Windows. Ma o meela nke ọma, na-akpali nnọọ mmasị aghụghọ site n'ọtụtụ akụkụ, yana a n'ezie na-adọrọ mmasị arụmọrụ na àgwà. Ọ bụrụ na ịchọrọ akụrụngwa ntụkwasị obi na nke ọhụrụ, yabụ laptọọpụ Surface bụ ihe ịchọrọ.
Ndị otu a dị ezigbo mma ọbụna maka ọkachamara were, ebe a na-achọsi ike kachasị elu. Na ngagharị ga-ahapụ gị n'anya n'ezie, yana ezigbo ihe owuwu ihe owuwu, yana ịdịte aka ...
1 Ahịa kacha mma na Surface
2 Ụdị ihu
2.1 Elu Pro
2.2 Laptọọpụ ላọ Gaa
2.3 Go Go Go
2.4 Laptọọpụ Larịị
2.5 Akwụkwọ Mmiri
2.6 N'elu Pro X
3 Gịnị bụ elu?
4 Ị nwere Windows zuru ezu iji wụnye mmemme ọ bụla?
5 Ebe ịzụta elu dị ọnụ ala
6 Kedu mgbe ịzụrụ laptop Surface dị ọnụ ala?
7 Microsoft Surface, ọ bara uru? Echiche m
Ahịa kacha mma na Surface
Laptop Microsoft dị n'elu ...
Microsoft Mkpa Pro 8 -...
Microsoft Surface Go 3 -…
Ka ọ dị ugbu a, akụrụngwa dị n'elu etolitela, nwere ụdị nwere ike ịmegharị maka mkpa dị iche iche yana yana AMD ibe, ọ bụghị naanị Intel dị ka ọ dị na mmalite. Nke a na-eme ka ha bụrụ ihe ọzọ a ga-eburu n'uche.
Iji nwee ike ịhọrọ nke kacha mma Microsoft Surface ụdị, ị kwesịrị ịma ihe ụlọ ọrụ Redmond na-enye ugbu a:
Ihe nlereanya a bụ mbadamba ụrọ dijitalụ na-arụ ọrụ dị elu nke enwere ike ịgbakwunye ma ọ bụ wepụ kiiboodu na ya. Onye na-agbanwe agbanwe nke nwere mmegharị kacha mma na ụdị dị iche iche iji dị ka laptọọpụ ma ọ bụ mbadamba mgbe ịchọrọ ya.
Ibu ya na olu ya dị obere n'ezie, na mgbakwunye na ịnwe nnwere onwe dị elu. Banyere ihuenyo ahụ, ọ na-enye ihuenyo mmetụ 12.3 ”nke dị elu karịa nkezi maka mbadamba, gbakwunyere ịnwe Windows 10 ịnweta sọftụwia niile ị nwere na PC ọ bụla ọzọ.
Laptọọpụ ላọ Gaa
Ọ bụ nsụgharị mara mma nke nwere nlezianya dị ukwuu. Ọ bụ akwụkwọ ultrabook nwere ihuenyo 12.4 ” yana panel mmetụ.
Ya mere, ị ga-enwe uru niile nke ultrabook, na nkasi obi nke ihuenyo mmetụ, nke ga-enye gị ohere ijikwa Windows 10 na mmegharị ahụ na emetụ, na-emepe ụwa nke ohere.
Ọ bụ ụdị kacha nta na nke dị mfe sitere na Microsoft. Na ihuenyo mmetụ 10.5 ”na ahụigodo nọọrọ onwe ya nke ị nwere ike wepu ma ọ bụ tinye na ihuenyo, iji rụọ ọrụ na mbadamba mbadamba ma ọ bụ laptọọpụ.
Ya mere, ọ dị nnọọ ka Surface Pro, ọ bụ naanị ntakịrị ntakịrị n'ihe gbasara arụmọrụ na akụkụ.
Usoro a nwekwara ihuenyo mmetụ, yana ụdị 13.5 "ma ọ bụ 15", dabere na ihe masịrị gị. Na mgbakwunye, ọ dị gịrịgịrị ma mara mma, maka ndị na-achọ ultrabook maka ụdị ọrụ niile.
Akwụkwọ Microsoft Surface 2 ...
Laptọọpụ a nwekwara ihuenyo mmetụ nwere ike ịpụpụ na ahụigodo, nwere ntọala 13.5 ”na 15”. Na mgbakwunye, ọ bụ ultrabook, dị ka nke gara aga. Naanị ihe dị iche bụ na na nke a na-elekwasị anya na-enyekwu ike maka ndị chọrọ ịrụ ọrụ dị mma.
N'elu Pro X
Microsoft Surface Pro X…
Ọ bụ 2 n'ime 1, nwere ihuenyo mmetụ 13 ”na kiiboodu nke ị nwere ike ikewapụ oge ọ bụla ịchọrọ iji dị ka mbadamba. Ị nwere ike iche na ọ dị ka usoro ndị ọzọ a hụlarị, ma nke bụ eziokwu bụ na ọ nwere nnukwu ọdịiche, ọ bụkwa na njikọ ya.
N'okwu a, 4G LTE gụnyere, yabụ ị nwere ike ịnụ ụtọ njikọ data ebe ọ bụla ịnọ, ọbụlagodi na enweghị njikọ WiFi.
Microsoft na-enyekwa ọtụtụ ndị ọbịa ngwa maka ngwaọrụ ndị a, dị ka ekweisi ikuku, akụkụ dị ka ụmụ oke na ahụigodo, ikpe, pensụl elu ama ama (pen digital for Surface screens), wdg.
Gịnị bụ elu?
Microsoft Surface bụ akara nwere ọtụtụ ngwaọrụ mkpanaka na ihuenyo mmetụ, dị ka aha ya nwere ike ịpụta. Ị nwere foldables na laptọọpụ nwere arụmọrụ dị elu yana ọmarịcha njem pụtara ìhè maka imewe ha, yana nkọwa ụfọdụ ị na-enweghị ike ịhụ na ngwaahịa ndị ọzọ, dị ka ahụigodo dị mma na mkpịsị aka aka.
Agbanyeghị na ụlọ ọrụ ahụ anaghị akpọ Surface ma ọ bụ mbadamba ma ọ bụ PC, eziokwu bụ na ha bụ mgbanwe ma ọ bụ 2-in-1 dị ka ngwaahịa ndị ọzọ na-asọmpi nwere ike. Ya bụ, ị ga-enwe ihe kacha mma n'etiti mbadamba ụrọ dijitalụ na laptọọpụ n'aka gị. Ụfọdụ ngwá e mere maka ugbu a ọrụ, dị ka evolushọn nke kpochapụwo akụrụngwa.
Otú ọ dị, arụmọrụ ya dị nnọọ elu karịa nke mbadamba nkume ọ bụla, nke yiri ultrabooks na laptọọpụ kachasị ike nke asọmpi ahụ, yana iji ihe eji eme ihe. Windows 10 kama gam akporo, ma ọ bụ iPadOS, dị ka ọ na-eme na ụdị ndị ọzọ. Nke a bụ ihe nwere ike igbochi ọtụtụ ihe n'ihe gbasara ngwa ị nwere ike iji, ebe ị nọ na Surface ị nwere ike ịnwe mmemme na egwuregwu vidiyo niile ị nwere na PC gị.
Ị nwere Windows zuru ezu iji wụnye mmemme ọ bụla?
Ee, Surface na-abịa nke ọma Microsoft zuru oke ma na-arụ ọrụ Windows 10. Enweghị oke dịka enwere ike dị na mbadamba nkume ndị ọzọ. Dịka m kwuworo, ha na-achọ ihe kachasị mma nke ụwa abụọ ahụ, na-agbakwụnye uru nke mbadamba na laptọọpụ, ma na-ewepụ ụfọdụ ihe mgbochi nke mbụ nwere ike inwe.
Na Surface, ị nwere ike ịwụnye ma mee ya software ọ bụla nke ị na-eji na Windows ị na-emebu, site na Office, gaa na ngwanrọ nke atọ, site na egwuregwu vidiyo. N'echiche a, ọ nweghị ihe dị iche na PC nkịtị.
Ebe ịzụta elu dị ọnụ ala
Enwere ike ịhụ Microsoft Surface na ọtụtụ ụlọ ahịa a na-ahụkarị ebe a na-enye ngwaahịa kọmputa, dị ka:
Amazon- Nwere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ụdị dị n'elu, yana ọnụ ahịa dịgasị iche iche ịhọrọ. Ọ bụghị naanị na ị nwere ike ịchọ ihe ị na-achọ n'ezie, mana ị nwekwara uru niile na nkwa nke ikpo okwu a, yana inwe ike irite uru na njirimara adịchaghị ma ọ bụrụ na ị bụ onye ahịa na-ere ahịa.
Ụlọikpe Bekee: nnukwu ụlọ ahịa Spanish nwekwara ụfọdụ ụdị dị n'elu n'etiti ngwaahịa ya. Ọnụ ahịa, na nke a, abụghị nke kachasị mma, ọ bụ ezie na ị nwere ike irite uru na nkwalite na onyinye ndị a na-ahapụ n'ikpeazụ. Ma, n'ezie, ị nwere ike ịtụ Surface gị n'ịntanetị, ka ha wee buru ya n'ụlọ, ma ọ bụ gaa na ụlọ ahịa n'onwe gị ma ọ bụrụ na ịchọghị ichere.
Microsoft Store: bụ ụlọ ahịa gọọmentị, ebe ị nwere ike ịzụta ngwaahịa dị n'elu yana ngwa. Dị ka ọ dị na ụlọ ahịa Apple ma ọ bụ Google, ndị Redmon na-enyekwa ngwaike ha site na ikpo okwu a.
mediamarkt: Ụlọ ahịa German na-enyekarị ọnụ ahịa asọmpi, ma ị na-azụta na ebe nrụọrụ weebụ ha ma ọ bụ n'onwe gị site na otu n'ime ebe ha na-ere ere. Agbanyeghị na ha enweghị nnukwu ụdị dị iche iche dịka ọ dị na Amazon, PCComponentes, ma ọ bụ ụlọ ahịa gọọmentị nke Microsoft.
Kedu mgbe ịzụrụ laptop Surface dị ọnụ ala?
na Laptọọpụ dị n'elu Ha enweghị ọnụ ahịa dị ala na ahịa, ọ bụ ezie na nke ahụ bụ ihe kwere nghọta, nyere atụmatụ ndị ha na-enye na àgwà ha. Ya mere, ị nwere ike chere otu n'ime ihe omume ndị a ka ị nwee ike ịchọta ha karịa ọnụ ala:
Black Friday: Black Friday na-abịa n'ọnwa Nọvemba ọ bụla, mgbe ekele gachara. Tọzdee nke anọ nke ọnwa a na-eweta nnukwu mbelata n'ọtụtụ ngwaahịa, yabụ na ị nwere ike nweta Surface gị ọnụ ala karịa n'ụlọ ahịa ọ bụla.
Ụbọchị Mbụ: maka ndị ahịa Amazon nwere Prime, ikpo okwu America na-enye mbelata ego pụrụ iche otu ụbọchị n'afọ. Ohere dị mma iji nweta uru nke ihe ị na-achọ na ọnụ ahịa ezi uche dị na ya.
Cyber ​​Monday: mgbe Black Friday gachara, ihe omume ịntanetị ọzọ na-eme n'ụbọchị Mọnde na-esote. Ụlọ ahịa niile dị na netwọk ahụ juputara na mbelata ego dị oke mma, dịka nke Fraịde gara aga. Ya mere, ọ bụ ohere nke abụọ iji nweta Surface gị ọnụ ala.
Day enweghị VAT: na ụlọ ahịa dị ka Mediamarkt enwere ụbọchị mgbe ngwaahịa teknụzụ na-agbada site na 21%, dabara na uru nke ụtụ isi a.
Microsoft Surface, ọ bara uru? Echiche m
Ọ bụrụ na ị bụ ọkachamara na ị na-achọ nnukwu otu, ma ọ bụ ọ bụrụ na-amasị gị ịnụ ụtọ ihe kachasị mma, nke bụ eziokwu bụ na Microsoft enwebeghị nkụda mmụọ na ụdị elu ya. Ọ bara uru itinyekwu ego iji nweta ihe mgbakwunye ndị ahụ niile, dịka:
Calidad adịchaghị, ejiri ihe ndị dị ka magnesium alloy chassis mechaa, nke na-enye ya ike, ịdị mfe, yana ikpo ọkụ ka mma.
Windows 10 Home na Pro maka kọmputa ndị nwere ike gbanwee ghọọ mbadamba nkume, nke bụ uru iji ụdị ngwanrọ ọ bụla, tụnyere mbadamba na gam akporo.
Oke ngagharị, ebe ọ bụ na ha dị oke-mkpa, dị oke ọkụ, kọmpat, ma nwee ikike dị elu nke ukwuu. Ị nwere ike ịrụ ọrụ ruo awa 10 n'otu chaja batrị.
El keyboard Ọ bụ ihe kacha mma ị nwere ike ịhụ na laptọọpụ, ma ọ bụrụ na ịhọrọ maka òké Microsoft, ọ nwere ụdị ndị so na nke kacha mma.
Ihuenyo mmetụ dị elu nkọwa, nke mere na ị nwere ike ijikwa mmegharị ahụ ma ọ bụ metụ ya aka n'ụzọ dị mma karị, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ime na-enweghị keyboard.
Njikọ dị mma maka mgbanwe / ultrabook. N'agbanyeghị eziokwu na akụkụ ha dị gịrịgịrị yana na ha na-ekerịta njirimara na mbadamba, ha nwere ezigbo njikọta, yana USB, Bluetooth, WiFi, 4G na ụdị ụfọdụ, wdg.
Ọrụ dị mma karịa mbadamba nkume ọ bụla. E jiri ya tụnyere nhazi ARM, na kọmpụta ndị a, ị ga-enwe ndị nrụpụta kachasị ọhụrụ na nke kachasị ike sitere na AMD na Intel, yana nhazi nke gafere 4GB nke RAM n'ọnọdụ ụfọdụ, yana nnukwu nchekwa nchekwa steeti siri ike.
Nke kacha njọ bụ n'ezie ụgwọ ya, ebe ọ bụ na ha abụghị laptọọpụ kacha ọnụ ala ...
Akwụkwọ ndetu HP
Akwụkwọ ndetu Toshiba Dynabook
Laptọọpụ dị ọnụ ala » Ụdị » elu